Content - Macluumaad la soo ururiyey oo ku saabsan covid-19
Vaccination mot covid-19 - somaliska
Covid-19 waa cudur faafa. Tallaalku waxa weeye habka ugu fudud/haboon ee loogaga hortagaayo in cudurka si xun loogu jirado ama loogu dhinto. Waxa uu tallaalku sidoo kale gacan ka geysanayaa dhimista faafitaanka cudurka covid-19 ee bulshada dhexdeeda. Waxa sidaa darteed muhiim ah inay dad badani doortaan inay is tallaalaan.
Iska qaadista tijaabo/iska baadhista covid-19
Lämna prov för covid-19 - somaliska
Waxa loo baahan yahay in tijaabo la iska qaado/la iska baadho si loogu ogaado inaad covid-19 qabtid iyo inkale. Shaybaadhka iyo tijaabadu waa isku mid. Tijaabo iska qaad haddii aad calaamado leedahay, xitaa haddii aad tallaalan tahay.